NAFAQADA CHOKEBERRY WAXAY U BOGSIISAA GURYAHA IYO KA HORTAGGA JIDHKA - DAAWADA DADWEYNAHA
Aronia waa madow-fruited, waa khad madow-fruited, - waa geed ama geed oo leh nooca berry macaan iyo labeen dhanaan, oo aad u faa'iido leh oo ku yaala guryaha.
Muuqaalka ballaadhan ee Chernoplodka, inkastoo ay suuqyada faa'iido leh oo la yaab leh, ayaa ahaa mid aad u dhow, oo ku dhowaad boqol sano ka hor, oo uu ku leeyahay dhirta udubdhexaad ah ee Ruush Ivan Michurin. Maqaalkani wuxuu kuu sheegi doonaa ku saabsan chokeberry, hantidiisa daawooyinka iyo contraindications.
Ma taqaanaa? Magaca Laatiin ee loogu talagalay chokeberry waa aronia melanocarpa, macno ahaanna loo tarjumay sida "berrinka madow".
Waxyaabaha kiimikada ah iyo walaxda kalooriga ee miro madow
Qaybta Aroni ayaa ka kooban sonkorta, sukrose, fructose, pectin iyo tannins, malic, folic iyo asiidh kale oo dabiici ah, tokopherols, phylloquinone, pyrodoxin, niacin, thiamin, anthocyanins, flavonoids, sorbitol, rutin, amygdalin, coumarins, cyanidine iyo xeryahooda kale ee kiimikada .
Qaybta fiitamiin ee miro-gaaban cajiibka ah ayaa sidoo kale ka muuqda dhammaan kala duwanaanta. Waxaa jira fitamiin C (vitamin C), citrine (fitamiin P), fitamiin A (beta-carotene), nicotinic acid (vitamin B3, ama PP), fiitamiin E, B1, B2, B6, C, K.
Waxaa ka mid ah qaybaha macdanta oo leh aronia oo gaar ahaan taajir ah, ugu horreyntii waxay ku haboon tahay in la xusuusto iodine, birta, boron, calcium, manganese, fluorine, copper, molybdenum.
Ma taqaanaa? Asaasiga dabiiciga ah ee chokeberry si aad ah u badan oo ka badan currants cas, raspberries, strawberries iyo mandarins. Marka la eego xaddiga fitamiin P, dhirtaas waa labaatan jeer ka badan tufaaxa iyo liinta iyo laba jeer oo midhaha miraha madow. Gooseberry, raspberry iyo strawberry waxay ku jiraan afar jeer yar oo iodine ah oo ka badan yeyga madow. Laakiin beta-carotene badan oo ka mid ah nooca casaan cagaaran.
Faa'iidooyinka ka mid ah chokeberry ee jirka
Guryaha bogsashada ee chokeberry waxaa go'aaminaya tirada badan ee walxaha bayolojiga firfircoon ee isku dheelitira dabeecadda laf ahaanta ee miro-khatarta.
Midhaha ugu sarreeya duufaanka Aronia waxaa loo isticmaalaa daawada dhaqanka iyo dhaqanka labadaba. daaweynta iyo ka hortagga xanuunka atherosclerosis iyo hypertension.
Miraha iyo casiirka dubida madow waxay leeyihiin hanti saaro xakameyn, kor u qaadida marinnada dhiigga, joojiyaan oo dib u soo celiyaan dhiiga. Thanks to tayada kuwaas, isticmaalka berry soo bandhigay oo leh jirro shucaac iyo dhiig-baxa, cudurada xididada, gaar ahaan sifooyinka sare u kaca iyo jilicsanaanta derbiyada xididdada dhiigga - si loo wanaajiyo lafahooda, iyo sidoo kale caloosha.
Pectins, oo ah qayb ka mid ah chokeberry, waxay gacan ka geysato ka saarista jirka walxaha shucaaca, birta culus, iyo sidoo kale bakteeriyada waxyeellada leh; Pectins, dhinaca kale, wanaajiyo waxqabadka mindhicirka iyo kelyaha, waxay leeyihiin haad aad u fiican iyo saameyn daweyn.
Chokeberry, oo loo isticmaalo cuntada, wuxuu awoodaa inuu hoos u dhigo heerka baruurta xun iyo xasilinta cadaadiska dhiigga. Saameynta wanaagsan waxay muujineysaa in cuncunku iyada oo lala socdo laabotooyinka iyo noocyo kala duwan oo xasaasiyad ah.
Daaweynta chokeberry waxaa loogu talagalay dadka qaba cudurrada nidaamka qallafsanaanta, maxaa yeelay qadar badan oo iodine ah oo cabitaanka sigaar cabba waa tayada qiimaha ugu weyn ee ku xadgudubta hawlaha tayroodh.
Intaa waxa dheer, fallopet ka caawisaa hagaajinta shaqada beerka, qawaaniinta nidaamka dheefshiidka, gaar ahaan leh aciditit hooseeyo.
Waa wax lala yaabo in bukaanka madow ee daaweynaya (dabcan, sida gargaarka) xitaa cudurada sida jadeecada, qandhada iyo xummadda casaanka ah, iyo waxyeelada kilyaha ee macaanka diabeteska ayaa sidoo kale calaamad u ah isticmaalka miro yar.
Anthosyanins ku jira chokeberry chokeberry ayaa leh hantida ka hortagga horumarinta burooyinka malignantiga ah, sidaas darteed berry wuxuu ku jiraa cuntada dadka bukaanka qaba.
Xitaa qof dhamaystiran oo caafimaad leh ayaa ka faa'iideysan doona cunitaanka miraha iyo cabitaanka madow ee madow, tan iyo Waxay hagaajisaa rabitaanka cuntada iyo fayoobaanta guud, sidoo kale waxay xoojisaa nidaamka difaaca jirka.
Faa'iidooyinka aronia inta lagu jiro uurka
Chokeberry waxay faa'iido u leedahay dumarka inta lagu jiro uurka, ugu horreyn sababtoo ah marxaladdan ayaa ah jirka hooyada hooyada uurka leh u baahan tahay si joogto ah u-buuxinta fitamiinada iyo walxaha raadraaca. Dabcan, waa wax aad u wanaagsan in ilaha nafaqada ee noocan ahi aysan ahayn kaniiniyada asalkoodu yahay, laakiin waxyaabaha dabiiciga ah.
Sida lagu xusay, yeygan madow wuxuu leeyahay hanti ka hortagga horumarinta dhiig-yaraanta, xoojinta xididdada dhiigga, dejinta cadaadiska dhiigga, hagaajinta shaqada beerka iyo caawinta xoojinta nidaamka difaaca guud ahaan. Isticmaalka this berry this waxay noqon kartaa mid aad u faa'iido leh xaalad walaac ah taas oo jirka haweenku u yahay waqtiga uurka.
Intaa waxaa dheer, saameynta faa'iido leh ee aronium ee nidaamka dheef-shiidka ayaa kaa caawin doona in laga takhaluso weerarada aan fiicneyn ee sunta sunta, ka hortaga miyir-beelka, calool-istaagga iyo waxyeellooyinka kale ee aan fiicnayn inta lagu jiro uurka.
Waa muhiim! Ka hor inta aadan uur qaadin intaad uurka leedahay, waa lagama maarmaan inaad la tashato dhakhtarkaaga.
Haddii soodhoweynta cunuggu uur leeyahay inta lagu guda jiro uurka, waxay u badan tahay in aan la joojin xitaa marka ilmuhu dhasho - ilaa iyo dhamaadka naas-nuujinta, sababtoo ah inta lagu jiro muddadaa faa'idada leh ee chokeberry oo ay weheliso caanaha hooyada waxaa loo wareejin doonaa ilmaha, hagaajinta nidaamka dheef-shiidka iyo mindhicirrada, iyo sidoo kale xoojinta nidaamka difaaca.
Bakteeriyada daawada dhaqameed: daaweynta cudurrada Aronia
Isticmaalka chokeberry waxaa lala xiriiriyaa ugu horreyn la miraha, laakiin caleemaha iyo xitaa cagaarka dhirta sidoo kale waxay leeyihiin guryaha daawada.
Delicious fitamiinka cabitaanka waxaa loo diyaarin karaa miraha ama caleemaha digo madow, iyo sidoo kale labadaba. Hase yeeshee, shaah qalabka shaah ah ayaa loo diyaarin karaa si madaxbannaan, si kastaba ha ahaatee, haddii aysan jirin wax suurtagal ah, had iyo jeer waa fursad ay ku tagaan farmashiyaha ama waydiistaan ​​suuqyada beeralayda suuqa.
Qaado dhawr miro ah oo caleemo ah (midab ama caleemo iyo caleemo) of chokeberry - ku xiran dhadhanka doorbidada - ku shub 0.5 litir oo biyo nadiif ah leh heerkul ah 70 darajo iyo jeermiska ugu yaraan 10 daqiiqo, ama ka sii fiican - nus saac.
Waxaad ku dari kartaa caleemaha shaaha iyo berry qallalan ee dhirta miraha kale - raspberries, jeeriga ama currants.
Qalab gaar ah - kariyo Faytamiin oo leh shaaha madow. Si arrintan loo sameeyo, biyaha waxaa lagu qasi karaa casiir 5: 1, karkariyo, iyo shaah madow (dhadhan), sonkorta iyo qorfe ayaa lagu daraa isku dar ah. Cabbitaanka waxaa la faafiyaa oo la sifeeyaa, kadibna waxaa loo diyaariyaa isticmaalka.
Juice of chokeberry waa la wada cuni karaa cusub ama diyaar u ah jiilaalka: waa mid aad u faa'iido leh si loogu isticmaalo si joogto ah cadaadiska cadaadiska, atherosclerosis, shuban, urolithiasis, iwm.
Si dhakhso ah isticmaalka casiir Berry Blackfruit si taxadar leh loo soo qaaday, la jajabiyey oo isku qasan sonkorta si ay u dhadhamaan.
Si aad u diyaariso casiirka loogu talagalay kaydinta dambe, waa in miro waa in marka hore la dhaqo, ka dibna la qalajiyo oo la xalliyo.
Markaas berry ah waxaa lagu meeleeyay baaquli dhaldhalaalka ah, biyaha lagu daraa heerka 100 g halkii 1 kg oo miro ah, isku dar ah ayaa lagu kariyaa kuleylka hooseeya ilaa nus saac. Heerkulka cimiladu waa inaanay ka badanayn 60 ° C, waxay ilaalinaysaa dhamaan sifooyinka wanaagsan ee ash buur.
Kadib markii wakhtigu dhamaaday, waa in la qaboojiyo, lakabaabaa blender, sifeeyaa (tusaale ahaan, iyada oo loo maro cheesecloth) iyo sonkor ama malab waa in lagu daraa dhadhanka. Casiir noocan oo kale ah ayaa lagu kaydiyaa meel mugdi ah oo mugdi ah, qaadata 0.5 daqiiqo cuntada ka hor laba jeer 2-3 jeer maalintii.
Haddii la qorsheeyay juuska goosashada jiilaalka, berry loo diyaariyey waa in la duubaa oo laga tuujiyaa casiirka (iyada oo loo marayo faashad ama baco dharka leh). Kaadida haray, biyaha waxaa lagu daraa cabirkiisu yahay 10: 1, kadib saacad ka dib mar kale la mariyo oo lagu qaso casiir hore loo soo riixay (nidaamka waxaa lagu celin karaa dhowr jeer, inta oo dhan la yareeyo qadarka biyaha).
Cabitaankii la dhammeeyey waxaa lagu shubay dhalooyinka nadiifka ah, qallalan ama dhalooyin (illaa qiyaastii 3-4 cm ilaa sare) iyo jeermis dilay 10-15 daqiiqo (iyadoo ku xiran mugga saxanka). Kadibna dhalooyinka waxaa lagu xiraa tuubooyin, gasacadaha leh furaha. Shoolka waa in lagu xiraa xarig, ka dib qaboojinta, shaabadeeyey, paraffin.
Haddii loo isticmaalo, sonkor ama malab ayaa lagu dari karaa casiirka haddii la doonayo. Aad u dhadhan fiican leh ku dar juuska madow ama jahawareerka cayayaanka.
Juice Aronia, marka lagu daro isticmaalka gudaha, waxaa sidoo kale loo isticmaalaa sidii daaweyn lid ku ah daaweynta gubista si loo daweeyo maqaarka cudurka qaba.
Iyada oo ku saleysan chokeberry, waxaad sidoo kale karin karno tiro cabitaanka fitamiinada. Cunnooyinka waxay ku xiran yihiin kaliya maaddooyinka la heli karo, dhadhankooda iyo fikradahooda.
Tusaale ahaan, waxaanu bixin karnaa ikhtiyaarkan: waxaan jaray dhowr plom cusub cusub iyo dhowr tufaax ah, ku dar 100 g oo ah miraha chokeberry, qas, ku shub 1 l oo biyo ah, ku dar caleemaha currant madow, raspberries, jeeriga, keeno karkariyo, cadaadis. Ku dar sonkorta dhadhanka. Cun kulul ama qabow.
Berry Fresh waa la bedeli karaa la qaboojiyey ama la qalajiyey.
Wolfberry sidoo kale waxay u adeegtaa sidii qalab ceeriin ah oo loo kariyo. noocyada liishooyinka iyo dabeecadaha ruuxa, oo qiyaas yar oo yar ayaa sidoo kale leh saameyn restorative. Intaa waxaa dheer, tincture karsan tifafan sare ee chokeberry leedahay hanti waxyaabo badan oo faa'iido leh sida ka saarto lafdhaqaaqa, gargaarka xanuunka, hagaajinta cuntada, iyo caadigeynta dheefshiidka.
Waa muhiim! Xad-gudubka tinctures-ka ee chokeberry wuxuu keenaa ka bixitaanka daran, madax-xanuun iyo kororka wadnaha garaaca. Sidaa daraadeed, cabitaannadaas sida daroogada waa in la qaato wax ka badan hal shaaha. Xaddiga xad-dhaafka ah ayaa si khaas ah u ah khatarta dadka waayeelka ah sababtoo ah khatarta sii kordheysa ee istaroogga iyo wadnaha.
Si looga hortago xanuunka atherosclerosis, waxaa lagu talinayaa in la isticmaalo decoction ee Jilibka Aronia. Si aad u diyaariso cabitaanka, si taxadar leh uga saari jilif ee geedka, ku rid, u gudbin iyada oo Booqday Furimaha Dagaalka hilibka ama ku dhufo blender, qalaji iyo mar kale mar kale.
0,5 litir oo biyo ah waa in la qaataa 5 buuxa (oo lagu rido) qaaddooyinka jilicsan ee loo diyaariyey habkan, karkari laba saacadood, u ogolow inay qaboojiyaan, daadi. Qaado maraqkan saddex jeer maalintii kahor cuntooyinka 20-30 mg.
Marka hypertension lagu taliyo in ay qaataan decoction ah midhaha of chokeberry 0.5 koob oo 3-4 jeer.
Waxaa sidoo kale wanaagsan in la cuno 100 g oo ah miro madow oo la qalajiyey maalin kasta, dhulka leh qadar yar oo sonkor ah iyo citric acid.
Codso iris si loo daaweeyo dhiig-karka iyo habka dhirta daawada. Tusaale ahaan xididdada cirridka, caleemaha qoryaha yar, cawska qoryaha la qalajiyey iyo miro cagaarka ayaa isku qasan 4: 3: 2: 1, ku shubay qadar yar oo biyo ah, la kariyey dhowr daqiiqo, qaboojiyey oo la cunay cunto ka hor 0.5 rodood 3-4 jeer maalintii.
Sidoo kale, waxaad ku soo kaban kartaa qaybo siman miraha beeraha iyo ubaxa, caleemaha qashinka, ubaxa arnica iyo miro madow.
Hal dheeraad ah decoction ee daaweynta hypertension diyaarisay chokeberry, midhaha abuurka karooto, fennel, xidid qalafsan, cawska cagaaran, ubax madoollada buluug ah, miro dhoobo ah, xididdada madaxdeeda. Saameynta waa 3: 2: 2: 3: 2: 2: 3: 3. Isku dar waxaa lagu shubay biyo karkaraya (200 ml oo biyo ah - 20 g oo geedo ah), waxaa lagu kululeeyaa biyaha qubeyska saacad badhkeed, bakhtiin, sifeeyaa. Maraqku waa la qasi karaa qayb ka mid ah biyaha la karkariyey waxaana la qaataa 3 jeer maalintii, 0.3 st.
Sidoo kale xakamaynta waxaa la soo dhejiyaa xayawaanka walnut (tan dambe waxaa lagu kariyaa biyo kulul 40 daqiiqo, ka dib marka taas oo qayb ka mid ah miro madow lagu daro maraq, isku dar ah ayaa loo keenay karkarana loo bakhtiiyo dhowr saacadood. Ka dibna waa la sifeeyaa oo la qaataa 0.5 koob (waxaad ku dari kartaa liin laga yaabaa in maraq).
Waa muhiim! Xanuun xad dhaaf ah ee chokeberry ee dhiig-karka ayaa halis noqon kara hoos u dhaca culus ee cadaadiska dhiigga. Isla markiiba waa inaad cuntaa miraha marka la eego xaddiga aan ka badneyn 3-4 qaado oo casiir, iyo toddobaadkii - wax ka badan nus koob.
Iyadoo dhiig la'aan (dhiig-yarida)
Daaweynta iyo ka hortagga dhiig-yaraantu waxa lagu talinayaa in la isticmaalo faleebo madow, halkaas oo ay sidoo kale waa mid waxtar leh in lagu daro rosehips (miraha waa in lagu shubaa darmuuska ah, ku shub biyo karkaraya iyo ka tago habeen).
Cabbitaanka wuxuu bilaabmaa inuu qaato maalinta koowaad ee wareegga caadada oo uu sii wado cabbitaanka inta lagu jiro usbuuca dhamaadka caadada.
Si loo wanaajiyo saamaynta faleebo la badaley faleebo geedo yar yar (2.5 qaado oo halkii 1 litir oo biyo ah karkaraya - loo diyaariyey si la mid ah). Dhamaadka wareegga, khudradda miraha iyo geedo yaryar ayaa lagu qasi karaa saamiga 3: 2 iyo cabitaanka 3-4 jeer maalintii nus saac ka hor cuntada, haddii aad rabto, waxaad ku dari kartaa malab si cabitaanka.
Waxa kale oo aad bedeli kartaa soo dhawaynta faleebo miraha iyadoo la isticmaalayo midhaha miraha - qalajiyey ama cusub.
Diyaarinta cawska qoyan
Si kastaba ha ahaatee, beeraha Aronia waxay bilaabaan inay madow ku noqdaan bisha Agoosto, si kastaba ha ahaatee, waa in la goosto intaa ka dib, sida buuxda ee hantida faa'iidada leh ee berry waxaa lagu uruuriyaa dhamaadka xilliga dayrta, macno ahaan ka hor bilawga ah ee dhaxan. Si loo go'aamiyo diyaargarowga berry, waxaa lagama maarmaan ah in xoogaa saxaafadeed. Haddii casiir mugdiga cas cas laga soo saaro midhaha, - waa wakhtigii beergooyska.
Berry waxaa loo isticmaali karaa gacanta ama gooyaa. Dukaanka cusub ee la kariyey, oo la dhigo dambiilo ama sanduuqyo, ayaa lagu kaydin karaa meel qabow dhowr maalmood, inkastoo ay ka fiican tahay, dabcan, in loo isticmaalo qalajinta ama si dhaqso ah loo qaboojiyo.
Si aad u qallajisid midhaha aad u baahan tahay, ku faafidda dusha sare ee lakabka. Waxaad dardargelin kartaa nidaamka adigoo isticmaalaya qalajiyaha ama foornada, laakiin heerkulku waa inuusan ka badanayn 60 ° C.
Ka dib markii la qallajiyey ka dib, berry waa la dhigaa bacaha warqadaha oo lagu kaydiyaa meel qalalan. Qodobbada waxtarka leh ee miro waxay ku badbaadin karaan sanadkan ama laba. Isla sidaas ayaa quseysa caleemaha cayayaanka madow.
Midhaha Aronia waxaa lagu keydin karaa iyada oo aan la qaboojin, laakiin heerkulka qolka waa inuusan ka badnayn 1 ° C isla markaana wakhti isku beddelan. Maqaasi waa mid ku habboon ujeedadaas, miraha beerta waxay ku seexan karaan ilaa guga xiga.
Contraindications iyo waxyeelada ka soo gaadhay caruusad madow
Sida xarun kasta oo daaweyn leh oo leh saameyn macquul ah, chokeberry waxay leedahay qaar ka hortag ah oo la isticmaalo. Waxaa la filayaa in tan iyo berrito ay leedahay hantida kordhinta acidity, hoos u dhigista cadaadiska dhiigga iyo hagaajinta dhiig-xinjirowga, waa in aan loo isticmaalin dadka qaba hypotonic, dadka u nugul dhiig-xinjirowga iyo thrombophlebitis ama kuwa kordhiya xinjirowga dhiigga. Aronia sidoo kale waa ka hortag haddii ay dhacdo in aysidhka sare, boogaha caloosha iyo duodenal.
Haddii aan tixgelinno tallaabooyinka taxadarka ah, waa ammaan in la yiraahdo isticmaalka joogtada ah ee chokeberry ayaa saameyn ku leh faa'iidada jidhka bini'aadamka.
Midhaha geedka tani waxay leedahay dhadhan wanaagsan waxaana loo isticmaali karaa noocyo kala duwan, marka lagu daro cusub. Siyaabo kala duwan oo caleenta madow ah ayaa u oggolaanaya qof walba in uu doorto saxanka, iyada oo qayb ka mid ah aronia ay si fiican u muujin doonto dhadhanka iyo sifooyinka faa'iidada leh.